दोस्रो चरणको लकडाउन यता ४ गुणाले घट्यो तरकारीको मूल्य, कुनको कति ? (मूल्य सूचीसहित) — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > दोस्रो चरणको लकडाउन यता ४ गुणाले घट्यो तरकारीको मूल्य, कुनको कति ? (मूल्य सूचीसहित)
दोस्रो चरणको लकडाउन यता ४ गुणाले घट्यो तरकारीको मूल्य, कुनको कति ? (मूल्य सूचीसहित)
काठमाडौं । देशमा दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भएसँगै तरकारीको मूल्य निकै घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार डेढ साता यता तरकारीको मूल्य निकै घटेको छ ।
समितिका अनुसार यो अवधिमा कुरीलोको मूल्य प्रति किलो औसातमा ३७५ रुपैयाँले बढेर ९५० रुपैयाँ पुगेको छ । वैशाख १६ गते प्रति किलो ५७५ रुपैयाँ रहेको कुरीलोको मूल्य अहिले बढेर ९५० रुपैयाँ पुगेको छ । यसको मूल्य अधिकतम १ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । बाँकी अधिकांश तरकारीको मूल्य घटेको छ ।
यो अवधिमा आलु, घिरौला, अदुवा, तितो करेला, ब्रोकाउली, ज्यापु काउली, काँक्रो, कागती, गाँजर, खुर्सानी, गोलभेडा, च्याउको मूल्य समेत घटेको छ । यो अवधिमा तरकारीको मूल्य ४ गुणसम्म घटेको छ । वैशाख १६ मा प्रति किलो ५५ रुपैयाँ रहेको स्थानीय काउली २७ गते (आज)सम्म आईपुग्दा प्रति किलो ३० रुपैयाँले घटेर अहिले औसतमा २५ रुपैयाँ प्रति किलो रहेको छ ।
अदुवाको मूल्य प्रतिकिलो १५ रुपैयाँले मूल्य घटेर औसनमा ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको छ । ३१० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको डल्ले च्याउ अहिले २९० रुपैयाँ रुपैयाँ रहेको छ । २५० रुपैयाँ रहेको कागती अहिले २१० रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको छ ।
वैशाख १६ गते प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ रहेको तितो करेलोको औसत मूल्य अहिले साढे १७ रुपैयाँ रहेको छ । तितो करेलोको मूल्य अहिले करिब ४ गुणाले घटेको छ ।
२०७८ वैशाख २७ गते १०:१२ मा प्रकाशित
फिट इन्टरनेशनल बन्यो फेसबुकसँग सम्झौता गर्ने नेपालको पहिलो डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी
दोस्रो चरणको लकडाउन यता तरकारीको मूल्य ४ गुणाले घट्यो (कुनको कति)
सात युवाद्धारा रक्तदान
प्रहरी माथि गोली प्रहार : ४ प्रहरी अधिकृतको मृत्यु, ७ जना घाइते !
सुनको मुल्यमा उत्तारचढाप
सुशान्त सिंह राजपूतको आत्महत्याले लियो नयाँ मोड, बिहार कोर्टको यस्तो फैसला !
हवाई यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? नेपाल एयरलाइन्समा ४ हजारसम्म सस्तो छ भाडा